काठमाडौंमा एकैदिन अहिलेसम्मकै बढी को'रोना सं'क्रमित, हेर्नुहोस बिस्तृतमा -
काठमाडौंमा एकैदिन अहिलेसम्मकै बढी को’रोना सं’क्रमित, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं जिल्लामा १२ जना को’रोना सं’क्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं जिल्लामा १२ जना स‌ं’क्रमित भेटिएको पत्रकार सम्‍मेलनमा जानकारी दिए । काठमाडौं जिल्लामा ५ महिला र ७ जना पुरुषमा सं’क्रमण देखिएको हो । यस्तै ललितपुरमा एक पुरुष र भक्तपुरमा एक महिलामा को’रोना सं’क्रमण देखिएको छ । नेपालमा मंगलबार थप ३१६ जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमितको संख्या १३ हजार ५६४ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म १३ हजार ५६४ जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या १३ हजार ५६४ पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।
डा गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ६० जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । जसमध्ये महिला ९ र पुरुष ५१ रहेका छन् । योसँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म ३१९४पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म ७७ वटै जिल्लामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिएको छ भने को’रोनाका कारण ज्यान गु’माउनेको संख्या २९ पुगेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज (टिचिङ)मा उपचाररत एकजना शिशुमा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डाक्टर सन्त कुमार दासका अनुसार ४५ दिनको शिशुमा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको हो ।
म्याग्दी घर भएका ती शिशुमा घाँटीमा स’मस्या देखिएपछि आइसोलेसन वार्डमा नै राखेर सोमबार श’ल्यक्रिया समेत गरिएको डा दासले बताए । ‘हाम्रो अस्पतालमा उपचारत ४५ दिनका शिशुमा को’रोना पोजेटिभ आएको छ । दुइ हप्ताअगाडी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए,’ डा दासले भने, ‘शिशुको घाँटीमा स’मस्या भएर श’ल्यक्रिया गर्नुपरेपछि को’रोना परीक्षणका लागि नमुना लिइएको थियो । अवस्था जटिल भएपछि हिजो आइसोलेसनमै राखेर श’ल्यक्रिया गरियो। ती शिशुको आज बिहान को’रोनाको रिपोर्ट पाजेटिभ आयो ।”
शिशुलाई अहिले आइसोलेसनमै राखिएको डा दासले जानकारी दिए । डा दासका अनुसार टिचिङ अस्पतालमा हाल ५ जना कोरोना पोजेटिभ बि’रामीहरु उपचार छन् ।
मेलम्चीको सुरुङ भ’त्किएपछि सांसद तामाङले भनेः भगवान रि’साएर दुर्घट’ना…
कोरियामा नेपाली कामदारको तलब ह्वात्तै बढ्यो !